Molo, wonke umntu, zikho iindaba ezilungileyo zethu sobabini kunye nawe, siphuhlise isimbo esimalunga nesithathu sokulungiswa kwendawo yokulungisa. Imifanekiso yereferensi yakho njenge,
UKUTHENGA: Ixesha lokwenyani lokujonga imeko echanekileyo. Ukuba umva wakho ugobile ngaphezulu kweedigri ezingama-25, iya kulungisa ukuma kwakho ngesilumkiso sokudlwengula ukuze uhlale uthe tye.
ISIQINISEKISO SE-INGENIOUS: Uyilo olu-8 oluyilwe nge-ergonomic. Ihambelana nejika lomntu xa linxibile. Izixhobo zerabha ezikumgangatho ophezulu ziguquguquka kakhulu, zikwenza uzive ukhululekile, kwaye awuyi kuziva uxinzelelo olungathandekiyo emagxeni akho xa uyinxibile.
ISAYENSI YESAYENSI: Yisebenzise iiyure ezi-2 ngosuku kwiiveki ezi-3, kwaye ungaziva uguquko olucacileyo. Imisipha yangemva iyenzelwa ukwenza imemori yemisipha kunye nokutshintsha imikhwa emibi.
UKUQINISA: Ukuhlawula ngeyure e-1 kunye nokusetyenziswa kweentsuku ezili-15. Ibhetri enamandla amakhulu angama-500m inokusetyenziswa ixesha elide. Inokuqhubeka ngokuchanekileyo ukulungelelanisa impilo yakho ende kwaye ayifuni kulungiswa.
1. Nxiba ulusu olungabonakaliyo, olukhululekile kunye nokuphefumla;
2. Ukubeka esweni isigxina sokujonga, ukulawula inkumbulo yemisipha;
3. Ukutshintsha ngasemva kungaphakathi kokufikeleleka ngokulula, kwaye bobabini abantu abadala kunye nabantwana banokuyisebenzisa ngokulula.
Ithuba: sebenza, funda, uhambe inja, uhambo, ukuzonwabisa, njl.
1. Uhlengahlengiso lwe-harness ubude obufanelekileyo;
2. Emva kokunxiba, faka umva, uphakamise isifuba, emva koko ubambe isitshixo soku-1 kwesibini amandla kwisikhumbuzo, isikhumbuzi siya kugungqisa amaxesha ama-3;
3.Qhubeka ngendlela efanelekileyo de isixhobo eso siphazamise kathathu;
4. Ngexesha elifanayo, isikhumbuzo sirekhode isimo sakho esifanelekileyo;
5.Xa une-hunchback Radian engaphezulu kwama-25 degrees, isikhumbuzi sesithuba siya kukuzazisa kwaye sikhulule ukuguquguqula ukukhumbuza;
6.Isikhumbuzo sokuma sikhumbuza ukuba ugcine isifuba sakho sime nkqo kwaye ujonge phezulu ngongcakazo.
Ubungakanani: kufanelekile konke, Izixhobo: I-ABS + ibhanti ephezulu ye-nylon ebunjiweyo.
Ubunzima: 85g, Umsebenzi: ukulungiswa komgogodla, ukuphuculwa kwe-hunchback, ukukhuselwa kombono, umthamo webhetri: 500mAH / 3.7v, ujongano lokutshaja:
ujongano oqhelekileyo we-V8 USB, abantu abafaka isicelo: abantwana / abantu abadala bafanele bonke, umbane: 5v, ukusetyenziswa kwamandla: 0.4w, ixesha lokutshaja: malunga ne-2 iiyure, ukubiza i-voltage: 5v
Ixesha lokuposa: Sep-20-2019